CPA(Certified Public Accountant) – NAY LIN AUNG
Home / CPA(Certified Public Accountant)
မြန်မာနိင်ငံတွင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (CPA) တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ဒီဂရီရရှိသူမားသာမက တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ မည်သည့်ဘွဲ့ဒီဂရီရရှိသူမျိုးမဆို မြန်မာစာရင်းကောင်စီ (MAC) မှ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ထားသော ဘာသာရပ်များကိုဖြေဆိုရပါသည်။ မြန်မာစာရင်းကောင်စီ (MAC) မှ အသိအမှတ်ပြုခံရသော CPA တစ်ယောက်အနေဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အသင်းအပင်း အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်းများကို အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း Audit လုပ်ငန်းများကို Professional တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
NLA FAA သည် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ (MAC) ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရသည့် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ပါသည်။ NLA FAA သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာရင်းကောင်စီက ပြဌာန်းထားသည့် CPA Professional Courses များကိုလည်း ဝါရင့်ဆရာကြီးများနှင့်အတူ အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင် ဆရာ၊ဆရာမများမှ သင်ကြား ပို့ချပေးလျက် ရှိပါသည်။
သင်တန်းကြေး – ဘာသာစုံ (၇သိန်းကျပ်)
စာမေးပွဲကြေး – (တစ်သောင်းကျပ်)
CPA Classes in NLA FAA
NLA FAA is recognized as one of the certified schools of Myanmar Accountancy Council (MAC). NLA FAA offers courses for the CPA by Myanmar. Accountancy Council (MAC) with the senior trainers and Experienced Lectures.